सरकार, छोरीको अस्मितामा धावा बोल्नेलाई जेल चलान गरियोस्! - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
गीता चिमोरिया साउन ७
पानीजहाजमाथि टिप्पणी गर्नेलाई साइबर कानुनकाे त्रास देखाउने माननीय महेश बस्नेत कहाँ छन्? यदि याे देशकाे कानुन सबैलार्इ बराबरी हाे भने यी प्रसाईलाई साइबर कानुन लाग्छ कि लाग्दैन बस्नेत ज्यू?
रातको झन्डै साढे १० बजेको छ। म बसेको शहरमा वर्षा शुरु भयो, हावाहुरीसहितको ठूलो वर्षा। केही पानीका थोपाहरु झ्याल हुँदै मसम्म आइपुगे। वर्षासँगैको सिरेटोले शरीरसँगै मन शीतल हुनुपर्ने हो तर अहँ... आज त्यस्तो छैन। ठिक उल्टो भइरहेछ। अरुबेला ९ बजेको हाराहारीमा निदाइसक्ने म आज विल्कुलै निद्रा छैन। मन पोलेपछि निन्द्रा लागोस् पनि कसरी?
ओल्टोकोल्टो गर्दै निदाउन खोजेँ, सकिनँ। झन्डै आधा घण्टापछि पानी पर्न रोकियो तर मेरो मनको छट्पट्टी रोकिएन। उठेँ र ल्यापटप खोलेँ।
दिनभर अफिसको काम र मिटिङले समाचार र सामाजिक सञ्जाल खासै हेर्न पाएकै थिइनँ। फेसबुक, टुइटर खोलेँ। फेसबुकको भित्तामा आक्रोशको आगो बलेको थियो। जुन स्वभाविक थियो। टुइटरको टाइमलाइन पनि फेसबुकभन्दा खासै फरक थिएन।
मान्छे दुईचार दिन भोकै बस्न सक्छ तर आफ्नो अस्मितामाथिको धावा सहन सक्दैन।
देशमा यतिबेला दुईजना मान्छेको चर्चा भइरहेछ, एकजना कक्षा ८ फेल अस्पताल सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं। अनि अर्का सरकारका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ। यी दुवै मानिस अहिले एउटै विषयले चर्चामा छन्। देशको लागि औधी राम्रो काम गरेर होइन, डाक्टर पढ्न गएका छोरीहरुको अस्मितामाथि प्रश्न उठाएका कारण।
झन्डै एक वर्षअघि प्रसाईंले आफ्नै अस्पतालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बंगलादेशमा डाक्टर पढ्न गएका नेपाली चेलीहरु ९ वर्षसम्म नफर्कने र उनीहरुलाई प्रोफेसरले करणी गरेर राख्ने गरेको भनेर दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।
उनले भनेका छन्, ‘आज म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्दिन्छु, त्यो पनि लेख्न जरुरी छ। बंगलादेश पढ्न गएका हाम्रा चेलीबेटीहरु किन ९ वर्षसम्म आउँदैनन्। अरु केटाहरुचाहिँ पाँच वर्षमै पास गरेर आउँछन्। त्यहाँका प्रोफेसरहरुले ती केटीहरुलाई करणी गरेर राखेका छन्।’
यो सुनेपछि भाउन्न भयो। ओहो! करणी गरेर राख्या छ? डाक्टर पढ्न गएकाहरुलाई? सोच्नै सकिनँ। २३ सेकेन्डको त्यो भिडियो हेरेपछि मेरो मनमा २३ हजारभन्दा बढी प्रश्न उब्जिए।
के आधारमा उनले याे बाेले? ८ कक्षा फेल भएका उनी नेपालीहरुले डाक्टर पढ्ने बंगलादेशका विश्वविद्यालय पुगेर खोज/अनुसन्धान गरे? कि उनैले विद्यार्थी पठाएका विद्यार्थी करणीमा परेका हुन्? यदि त्यस्तो हो भने उनलाई तत्कालै मानव बेचविखन, शरीर बन्धक र यौन हिंसाको अपराधमा जेल चलान गरिनुपर्छ। यदि यी मध्येका केही पनि कुरा यथार्थ होइनन् भने बिना तथ्य कसैका छोरीमाथि यति गम्भीर आरोप लगाउने छुट कसले दियो? संविधानको कुन धाराले? नेपाल राज्यको कुन कानुनले ?
त्यसपछि उनलाई खोजेँ। केही छोटा भिडियो क्लिप भेटिए।
एउटा भिडियोमा उनले आफ्नोबारे भनेका छन्, ‘मैले अरुसँग पनि भन्या छु। मैले जम्मा ८ कक्षा पढेको छु। सरसँग त्यतिखेर कुरा मिलेन। मलाई रेस्टिकेट गर्दिनुभयो। त्यसपछि मैले पढाई छोड्दिएँ।’
‘मास्टरै कुट्नुभयो कि क्या हो ?’
प्रस्तोताको प्रश्नमा उनले घुमाउरो पारामा त्यो स्वीकार गरेका छन्। ‘मास्टरै...त्यस्तै त्यस्तै भो भनौं न ।’
अर्को एक भिडियोमा उनले दुईचार जना मानिस मरे पनि कुनै फरक नपर्ने भन्दै सरकारलाई क्रुर हुन सुझाव दिएका छन्।
भनेका छन्, ‘एकजना अधिकारी दम्पत्ति अनसनकै क्रममा मरे त यार। एक दुईजना मान्छे अनशनमा मर्छन्, देश परिवर्तन गर्नको लागि २० औं हजार मान्छे मर्छन्। ३ लाख मान्छे एकैदिन मरेको हामीले फ्रान्सको युद्ध सुन्या छौं। एक दुईजना मान्छे मर्न दिउँ केही बिग्रिँदैन। राज्य भनेको क्रुर भएर चल्नुपर्छ भनेर त मैले पटक पटक भनिरहेको छु।’
विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईं र कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ
उनले गोविन्द केसीलाई पनि मरोस् भन्ने कामना गरेका छन्।
डा.गोविन्द केसीले थालेको १५ औं अनशनको आज २४ औं दिन हो। तिनै प्रसाईंको सुझाव मानेर हुुनुपर्छ सरकारले ठोस समाधानको उपाय खोजेको छैन। प्रधानमन्त्री केसी भेट्न अनशनस्थल पुगेका छैनन्। केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारको क्षेत्र नबनाऔं भन्नुमा उनको के स्वार्थ छ? उनी धनी/सम्पन्न बन्न यसो गरिरहेका छन्? कि उनलाई केही थान गाडीहरु जोड्नु छ?
आफ्नै मनले भन्यो अहँ होइन। त्यसो हुन्थ्यो भने उनी बोरामा औषधि बोकेर किन पुग्थे सुदुरका जिल्ला? अनि किन तर्थे भेल एउटा हातमा शरीर जाँच्ने झोला (स्टेस्थेस्काेप ब्याग) र अर्को हातमा लौरो बोकेर? उनी चाहन्छन्, पैसा नहुनेहरुले पनि उपचार पाउन्। औषधि नपाएर कसैले मर्नु नपरोस्। त्यसैले त जान्छन्, दुरदराजका ती गाउँहरुमा महामारीको उपचार गर्न। जीवन जल र सिटामोल बाेकेर।
दुर्गा प्रसाईले गोविन्द केसीलाई मर् भने। मरे मरोस् भने। सरकारले मर्न देओस् भने। उनले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र व्यापारीको चंगुलमा हुनु हुँदैन भन्ने हामी सबैलाई मर भने। आफूजस्ता माफिया र मनलाग्दी बोल्ने केही मानिसहरु मात्रै बाँचे यो देशका लागि पुग्छ भने। सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र सुविधाको माग राख्ने सबै गरीब नेपालीहरुलाई मर भने। पानीजहाजमाथि टिप्पणी गर्नेलाई साइबर कानुनकाे त्रास देखाउने माननीय महेश बस्नेत कहाँ छन्? यदि याे देशका कानुन सबैलार्इ बराबरी हाे भने यी प्रसाईलाई साइबर कानुन लाग्छ कि लाग्दैन बस्नेत ज्यू?
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवाको क्षेत्र बनाऔं, गरिब नागरिकले पनि उपचार पाउनुपर्छ भनेर म किन पनि भनिरहेको छु भने, मेरो परिवार सिसावाल गाडीमा गुड्ने र खोकी लाग्ने बित्तिकै विदेश उड्ने आर्थिक हैसियतको छैन। दुई वर्ष अघिमात्रै बुवाको ढाडमा निस्किएको एउटा सानो मासुको डल्लो के हो भनेर थाहा पाउन चितवनको एक निजी अस्पतालमा झन्डै ५५ हजार तिर्नुपर्यो। यो हाम्रो परिवारको लागि त्यति सजिलो होइन। मेरा लागि त बिल्कुल हुँदै होइन। सरकारी अस्पतालमा भएको भए ५–१० हजारमा काम सकिन्थ्यो भन्ने लागेको थियो।
म त भाग्मानी मध्येमै परेँ। हजारमा काम सकियो। लाखौं रकम जुटाउन नसकेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन नपाएका र मृत्युपछि पनि शव लान नपाएका परिवारलाई के लाग्ला?
दुर्गा प्रसाईको गुनासो पनि रहेछ, ‘मेरो छोरीले, दुर्गा प्रसाईं चिन्छेउ भन्दा चिन्दिनँ भनिछे। किन उल्लाई लाज लाग्यो कि क्या हो?’ लाज मात्रै होइन यस्ता बाउ भएपछि जिउँदै मरेतुल्य भयोहोला उनलाई। जसले आफ्नो स्वार्थका लागि छोरीहरुलाई करणीसम्मको आरोप लगाउन भ्याए। उनी डाक्टर रछिन्। सोच बदल्ने औषधि हुन्थ्यो भने पिलाउथिन् होला। दुर्भाग्य अहिलेसम्म चिकित्सा विज्ञानले शरीर स्वस्थ पार्ने औषधि मात्रै बनायो, दिमाग स्वस्थ पार्ने औषधि अझै बन्न सकेको छैन।
दुईटा हात, दुईटा आँखा, दुईटा कान हुने बित्तिकै। दुईटा खुट्टाले टेकेर यस धर्तीमा रहने बित्तिकै सबै मान्छे कहलाउन लायक हुँदैनन्। दुर्गा प्रसाई मान्छे होइनन्। उनका अभिव्यक्तिहरु सुनेपछि मैले यस्तै निर्क्याैल निकालेँ।
प्रसाईकै अभिव्यक्तिबाट प्रेरित भएर हालका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले एउटा विद्यालयको कार्यक्रममा कथा खोल्छु भन्दै स्कुले भाइबहिनीका अगाडि बंगलादेश पढ्न गएका चेलीहरुका विषयमा बोल्नै नहुने विषय बलेका छन्।
‘बंगलादेशमा हाम्रा छोरी/चेलीहरु डाक्टर पढ्न जानुहुन्छ भने डाक्टरको सर्टिफिकेट लिनको लागि उसले कहीँ न कहीँ आफूलाई बेच्नैपर्छ। ...मैले सुनेको छु उनीहरुले त्यहाँ आफूलाई नसुम्पिकन सर्टिफिकेट प्राप्त गरिरहेको स्थिति छैन।’
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको मन्त्री तामाङको ५१ सेकेन्ड लामो त्यो भिडियो हेरेपछि म खङ्ग्रङ्ग भएँ। अचम्ममा त म त्यतिबेला परेँ जब उनले आफू सही छु भन्दै क्षमायाचनासहितको विज्ञप्ति निकाले। म सही छु, तर मेरो कुराले कसैको मनमा ठेस पुगेको भए माफी चाहन्छु भन्ने उनको विज्ञप्ति पढेपछि थाहा भयो कि उनी यो विषयमा अझै गम्भीर छैनन्।
सुनेको आधारमा देशको मन्त्रीजस्तो मान्छे (त्यो पनि कानुनमन्त्रीजस्तो मान्छे) ले यस्तो गम्भीर आरोप लगाउन मिल्छ? बंगलादेश डाक्टर पढ्न गएका छोरीहरुले उनीसँग यो बेथा खोलेका हुन् भने कति जनाले उजुरी दिए र कतिलाई कारवाही भयो? डाक्टरको सर्टिफिकेट लिन छोरीहरुले शरीर बेच्नु पर्नेबारेमा उजुरी परेको थियो भने त्यसको वैधानिक उपचार सरकारले कसरी खोज्यो?
उनले बंगलादेश गएका छोरीहरुले शरीर बेच्नुपर्ने कुरामात्रै गरेका छैनन्। सँगै भनेका छन्, त्यसो हुन नदिन नेपालमै मेडिकल कलेज खोल्न पाउनुपर्छ।
अब उनी र दुर्गा प्रसाईमा कसरी फरक छुट्याउनु?
संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ। भनिएको छ, प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ। बंगलादेश पढ्न गएका छोरीहरुलाई यो हक हुन्छ कि हुँदैन? सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा माग गर्ने नेपालीलाई यो अधिकार हो कि होइन ? यदि कानुन हक समाधान हो भने किन मरुन् भने दुर्गा प्रसाईले ? यसमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।
मौलिक हक अन्तर्गत नै १८ नम्बर बुँदामा समानताको हकको व्यवस्था छ। भनिएको छ, सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। त्यसो हो भने सरकारले तत्कालै पक्राउ गरोस्, शेरबहादुर तामाङ र दुर्गा प्रसाईलाई। कोही मन्त्री भएकै कारण अनि कोही प्रधानमन्त्रीको आसेपासे भएकै कारण कानुन हातमा लिएर नागरिकको मानमर्दन गर्ने छुट छैन। संविधानले त्यही भन्छ।
म अचम्ममा परेको छु। सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत रहेका मन्त्रीले त्यहाँ बेचिने चेलीको विषयमा किन बोलेनन्? झापापछि सबैभन्दा धेरै मानव बेचबिखन हुने जिल्लामा छ, सिन्धुपाल्चोक। किन मार्मिक लागेन त्यो कथा उनलाई? अनि दुर्गा प्रसाईलाई किन पीडित बनाएन झापाबाट बेचिनेहरुको कथाले?
मलाई आश्चर्य लागेको छ, बाहिर पढ्न जाने छोरीहरुको समस्या छ भने सरकारले त्यसको समाधान खोज्ने हो। यदि कसैले बन्धक बनाएको छ भने कानुनअनुसार कुटनीतिक च्यानलमार्फत कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने हो। संविधानको भाग ३ को २९ नम्बर बुँदामा शोषणविरुद्धको हकको व्यवस्था छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै आधारमा कुनै पनि किसिमले शोषण गर्न पाइँदैन। समस्यै भए पनि कानुन मन्त्रीले संविधानको यो धारालाई आधार मान्दै कानुनी उपचार खोज्ने कि मेडिकल कलेज खुलाउने कुतर्कका लागि छोरी चेलीको बद्नामी गर्ने ?
मैले गम खाने विषय अर्को पनि छ। जतिबेला महिला अधिकारको कुरा आउँछ, उदाहरण दिइन्छ, ‘देशमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश महिला भए।’ यो बेला उनीहरुले केही बोल्नुपर्दैन? जसले ३३ प्रतिशतको नारामा चुनाव जिते उनीहरु कहाँ छन्? ५१ प्रतिशत नागरिकको यो पीडा उनीहरुलाई किन दुख्दैन? कि यो विषयमा बोल्न सरकार वा पार्टीको अनुमति चाहिन्छ? हो भने शिर निहुर्याउनुस्। अब तपाईहरुले महिलाको विषयमा बोल्ने अधिकार छैन। पार्टीभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएन भने तपाईहरुले शेरबहादुर तामाङ र दुर्गा प्रसाईहरुको जयजयकार गर्दै हिँडे हुन्छ।
र अन्तिममा, कुनै पनि पदका लागि अयोग्य घोषणा गर्दै कानुन मन्त्रीलाई वर्खास्त र दुर्गा प्रर्साइलाईं जेल चलान उपयुक्त निर्णय हुनेछ। कम्तिमा, अब उपरान्त अर्को कुनै शेरबहादुर तामाङ वा दुर्गा प्रसाईंले महिलाको आत्मसम्मानमा ठेस नपुर्याउन्, बिना आधार जे पनि बोल्दै नहिँडून्। म फरि पनि भन्छु, मान्छे दुईचार दिन भोकै बस्न सक्छ तर आफ्नो अस्मितामाथिको धावा सहन सक्दैन। यो मेरो मात्रै नभई देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्याको आक्रोश हो। यो मेरो मात्रै होइन, डेढ करोड जनताको आवाज हो।
आगे सरकारको मर्जी।
प्रकाशित ७ साउन २०७५, सोमबार | 2018-07-23 15:46:09